Naqshadeynta 7 Mashruucyada SEO ee Daryeel Caafimaad
Search Engine Optimization (SEO) wuxuu hubiyaa in goobtaada la heli karo goortaqofku wuxuu sameeyaa su'aal ku saabsan makiinadda raadinta. Tusaale ahaan, haddii isticmaalaha webka uu raadinayo dhakhtarka wadnaha ee Boston, halkaasna waxaa ku yaalwaa kuwo badan oo ku takhasusay cilmi-nafsiga ee aagga, si cad, waxaad rabtaa in dhaqankaagu yahay inuu noqdo midka ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta.
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Jason Adler wuxuu bixiyaa toddoba khiyadood oo SEO ah oo la adeegsan karo iyo istaraatiijiyado si aad u siiso ururkaaga qaybta tartanka ee qaybta daryeelka caafimaadka iyokaa caawiya inaad kudhex gasho natiijooyinka raadinta - calcio balilla genova vendita pneumatici.
1. Dooro ereyada saxda ah
Samee liis dhamaystiran oo ereyada ah, oo aad u malaynayso in shakhsiyadu qori doonaanmarkaad raadineyso xarun caafimaad iyo adeegyo. Ka dib marka la soo uruuriyo liiska erayada raadinta, qiimee wax ku oolnimada iyaga oo isticmaalayaQorshaha Erayada Googol ee Google. Imtixaanku wuxuu qeexayaa odhaahyada ay leeyihiin raadin muhiim ah bishiiba, laakiin tartan yarlaga helo goobo kale.
2. Soocitaanka Macluumaadkaaga Metad: Qeexitaanka Meta iyo Title Tags
Erayada isku dhafan ee dhexgalka SEO-gaaga waa ineey joogaan metadatabog kasta iyo inta lagu jiro mawduuca koowaad ee goobtaada. Metadata waxay leedahay calaamado HTML ah oo ku yaala inta u dhaxeysa madaxa xiran iyo furantags on khaanadaha HTML ee faylka. Xogta Meta ayaa caawisa mashiinka raadinta si loo ogaado waxa bogga uu ku saabsan yahay inta uu ku qoran yahay cinwaanka cinwaankasida cinwaanka bogga.
3..Abuuro Qodobbada Lahaansho-Bilaash ah
U abuurto waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay bogga adiga oo ka wakiil ah xaruntaada caafimaadka si loo hubiyoin ay istaagto oo ay ku siiso loolanka tartanka internetka. La socodsiinta dhagaystayaashaaga adigoo adeegsanaya suuq-geynta qiimaha tayada ayaa suurtagal ahsi aad u muujisid khibraddaada iyo qiimaha iyo ugu dambeyntii, helitaanka darajada mashiinka raadinta.
4. Hubi inaad leedahay Khariidad Site ah oo ku taal Website-kaaga
Abuuritaanka khariidad sahlan oo fudud ah ayaa badanaa ah hurgumada hoosta ee isdhexgalkaagagoobta leh matoorada raadinta. Khariidadu waxay ku siinaysaa aragti ku saabsan Yahoo, Bing iyo xitaa Google oo ku saabsan sida goobtaada loo qaabeeyey oo loo xiray.
Khubarada caafimaadka intooda badani waxay ka maqan yihiin fursadda ay ugu sarreeyaan isticmaalka sariiraha,fiidiyowyada, sawirada iyo noocyada kale ee isdhexgalka. Buuxi mareegtaada internetka iyo macaawinada ku habboon ee loo adeegsado qaababka kala duwanee raadinta toosan.
6. Raadinta Raadinta ee Degmada
In ka badan kala badh baaritaanka waxaa lagu fuliyaa iyada oo loo marayo isticmaalka qalab mobile. Degmoraadinta waa qodob muhiim u ah ururka daryeelka caafimaadka sababtoo ah bukaannadu waa inay soo booqdaan xarumahaas xarumahaas ka hor intaanayadeegso adeegyadooda.
7. Isticmaal Mareegaha Bulshada si Kordhinta Saarista
Warbaahinta Bulshadu waxay wadaa gaadiidka goobtaada waxayna fududeyneysaa laba-dhinacisdhexgalka ka dhexeeya qof joogto ah iyo urur. Meelaha bulshadu waxay saameyn ku yeeshaan SEO sida ku xiran xiriirkadhisida iyo kaqeybgalka content.
Weli shaki ku ah muhiimadda SEO ee xirfaddaada? Waqtigan xaadirka ah 55%ee dadka waaweyn ee Maraykanka oo casriga ah, taas oo muujinaysa sida ay muhiim u tahay in lagu daro sare ee natiijooyinka raadinta in bukaanku suuragal yahay byiyagoo raadinaya qalabkooda iyo sidoo kale mashiinka PC-ga. Hirgelinta hawlaha kor ku xusan, waxaad kordhin doontaa internetkajoogitaanka dhaqtarkaaga iyo inaad gaarto macaamiisha cusub.